I-Semalt iveza i-Amazing Scraping Software
I-crawler ye-web uhlelo oluhamba nge-intanethi ukuthola imithombo njenge-automated script. Ifuna amagama angukhiye, izixhumanisi kanye nokuqukethwe okuhlukahlukene kumakhasi wewebhu. Empeleni, ukukhwabanisa kwewebhu kugxile ekutholeni ulwazi oluwusizo kubasebenzisi balo phezu kwenetha.
Indlela i-Web Crawler Works ngayo
Umqambi webhubhu uthola amakhasi kuwebhu bese uwahlukanisa ngendlela ezenzakalelayo ukusekela imibuzo ethile. Abakwa-Web crawlers benza wonke umsebenzi ngaphansi kwamagama ahlukene, afana namarobhothi nama-indexers othomathikhi. Ngaso sonke isikhathi ukusesha kwewebhu kufaka umbuzo othize wokusesha, laba bahlaseli bangakwazi ukuskena wonke amakhasi wewebhu abalulekile ukuze bathole idatha eqondile - qual a melhor hospedagem de sites. Lapho abakwa-crawlers bevakashela ikhasi lewebhu, bangabuye babheke amanye amakhasi adingekayo ukuvakashelwa. Ngenxa yalokho, abakwa-web crawlers bangaxhumeka kumasayithi amasha ahlukahlukene, bathathe amanothi wezinguquko ezingenzeka kumasayithi akhona futhi bangathola nanoma yiziphi izixhumanisi ezifile. Ngale ndlela, abakwa-web crawlers banganqamula ngamakhasi ahlukahlukene ewebhu ukuqoqa imiphumela efunwa amakhasimende abo. Ngaphezu kwalokho, abanikazi bewebhu banenketho yokunquma ukuthi yimaphi amakhasi abo abafuna ukuwavimba.
Ukuthengiswa Kwemininingwane: I-Technique Ephumelelayo
Ukuchithwa kwemininingwane kungasiza abakwa-web crawlers ukuba bakhiphe ulwazi oluthe xaxa kusuka kumininingwane yolwazi nge-inthanethi. Lo msebenzi ubasindisa isikhathi namandla, ngakho-ke bangenza amanye amaphrojekthi enkampanini yabo. Kukhona amanye amathuluzi okumbumbulu kwedatha angakwazi ukuhlaziya ukuziphatha kwangaphambilini kwabasebenzisi abathile futhi angakwazi ukubikezela izitayela ezingasiza amabhizinisi ukuba aphumelele. Namuhla, izimayini zedatha zingathola amaphethini athile yedatha phezu kwe-Inthanethi ukuthi ngisho nabaqeqeshiwe bangase baphuthelwe. Ukumbiwa kwedatha kuyinkqubo ebalulekile futhi ethandwayo. Phakathi nenqubo yokukhipha, abaseshi bewebhu kumele babhekane namaphutha amaningi wekhasi, kanye nedatha ethize esezilimini ezihlukene kanye nemikhawulo engavamile.
Khipha idatha kusuka ezithombeni
Izinkampani eziningi namuhla zithatha futhi ukukhipha izithombe zokufanisa nezitolo, futhi zivame ukuzihlaziya ukuhlinzeka kangcono kumakhasimende abo. Ngokusebenzisa ukukhwabanisa kwewebhu, bangabona imifanekiso yemikhiqizo efanayo, kanye nemikhiqizo efanayo emakethe.
Ukubaluleka kwama-Web Crawlers
Namuhla izinkampani eziningi zisebenzisa ama-web crawlers ukuze zibe ne-intanethi enamandla, ngokuqoqa idatha ehlukahlukene, njengamanani wemikhiqizo efanayo, ukubuyekezwa , uhlu lokuthintana nemifanekiso eminingi. Izithombe abazibuthela zingabasiza ukuba bathuthukise izinsizakalo zabo futhi bakhiphe imikhiqizo engcono namanani kunabancintisana nabo. Ngenxa yalokho, bangenza inkampani yabo ibonakale ibe ngcono futhi ibe yimpumelelo. Ngakho, abakwa-web crawlers bangaba usizo olumangalisayo lwamabhizinisi, njengezingosi ze-e-commerce nezinye amabhulogu, abafuna ukuzuza futhi abaphumelele. Amabhizinisi amaningi emhlabeni wonke namuhla afuna ukuthola izindlela eziphumelela kakhulu nokuphumelela ukunqoba abancintisana nabo futhi bathole amakhasimende amaningi. Abakwa-Web crawlers bangabasiza ukuba baphumelele ngokwengeziwe, ngokuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yabo, babe nezintengo ezingcono kakhulu futhi banikeze kangcono.